search 20 jobs founded for you
PHP Senior Developer (Magento)
PHP Senior Developer အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရမည့် project ဖြစ်ပါသည်။ Magento ပိုင်း လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Company က လုပ်နေတဲ့ project အတွက် Module တွေဝင်ရေးပေးရပါမည်။ project detail ကို နောက်ပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ဝင်စားပါက ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
50000 - 100000 MMK
0 applicants 50000- 100000 MMK
I needaFrench translator who will server asacounter-translator for our lawyer atacourt hearing in Yangon, where there will beaFrench contestant together with an official French-Myanmar translator. The task of our translator is to verify the translation of the other translator.
Odoo Web developer
400000 - 600000 MMK
0 applicants 400000- 600000 MMK
Odoo web developer အလိုရှိပါသည်။Development 80% ခန့်ပြီးစည်းပါပီ။လိုအပ်သည့် Data များလဲဖြည့်ပြီပါပီ။Finalize ပြုလုပ်ရန် နှင့် system ချိတ်ပေးရန်းသာကျန်တော့သည်။Interview ပြီး confirm ပါက ရုံးသို့ ၁ ပတ်ကို ၂ရက် ခန့်လာပေးရပါမည်။Odoo experience ရှိသူကိုဦစားပေးပါမည်။
FB Page Post (Content Writer)
142635 MMK This is the average bid amount by the applicants.
24 applicants (Avg bid) 142635 MMK
For start-up FB page posts content writer. Some experience in writing contents on FB.Need business and technical knowledge on FB.
Japanese Burmese Zawgyi Unicode Story Writing 111 +2
Video contents creator
30000 MMK This is the average bid amount by the applicants.
2 applicants (Avg bid) 30000 MMK
<Video content creator>1. We are planning to set upafemale idol group in Myanmar. We are planning to film the audition, training, their private, edit, and uploadavideo (10-20 minutes) onceaweek on Youtube. We are looking foraprofessional person who can work with us to structure the con...
Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Premier Pro CC Adobe Premier Elements 111 +1
558000 MMK This is the average bid amount by the applicants.
5 applicants (Avg bid) 558000 MMK
Job briefWe are looking foraShopify Web Developer to be responsible for the innovative web design setting up and layout of our website. Web developer responsibilities include building our website from concept all the way to completion from the bottom up, fashioning everything from the ho...
Thai Language Typing
30009 MMK This is the average bid amount by the applicants.
5 applicants (Avg bid) 30009 MMK
Project - scan ဖတ်ထားသည့် ထိုင်းဘာသာ စာအုပ်များကို Word တွေ ထိုင်းဘာသာဖြင့် ပြန်ရိုက်ပေးရန်Qty: စာအုပ်လိုက်တွေ ဖြစ်ပါမယ်Language:, Thaiစျေးနှုန်း: စာလုံးတလုံး ရိုက်လျှင် ဘယ်လောက်တရက်မှာ A4 ဘာနှမျက်နှာ ရိုက်နိုင်မလဲ သိလိုပါသည်။
Java Script Senior Developer
500000 - 700000 MMK
3 applicants 500000- 700000 MMK
Java Script Senior Developer အနေဖြင့် ၃ လ contract ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် developer အလိုရှိပါသည်။- Client ၏ ရုံးသို့ သွား၍ Senior အနေဖြင့် ရုံးတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း၍လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။ - J2EE လုပ်နိုင်ရမည်။- Client ၏ ရုံးသို့ ပထမဦးဆုံး ၁ ပတ်သွားပေးရမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အနည်းဆုံး ၁ ပတ်...
Logistic Web and App
8541905 MMK This is the average bid amount by the applicants.
28 applicants (Avg bid) 8541905 MMK
Logistic နှင့်ပတ်သက်သည့် Web နှင့် App (IOS & Android) ပြုလုပ်ရန်ရှိပါသည်။ပါဝင်မည့် features များမှာ အောက်ပါအတိုင်း အတိုင်းဖြစ်သည်။Backend1. Admin User Managment (View/Add/Edit/Delete)2. Trucks Management (Information of driver and trucks available)a) View/Add/Edit/Deleteb) Order History3. Clien...
Translation & Interpretation Freelancer (English to Myanmar)
33513 MMK This is the average bid amount by the applicants.
83 applicants (Avg bid) 33513 MMK
Translation & Interpretation (English to Myanmar) ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် freelancer အလိုရှိပါသည်။ Startup, Biz Terms တွေ ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။Oct9ရက်မှ Nov 16 ရက်ထိ လုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ Nov 16 ရက်မှာတော့ပွဲရှိတဲ့အတွက် ပွဲတစ်ခုလုံးအတွက် ဘာသာပြန်ပေးရမည်ဖြစ်သ...
English (UK) Burmese